CITY FORM Design बाट आधुनिक पार्क, शहर र बगैंचाका बेंचहरू
पार्क, शहर र बगैचा बेन्चहरू
पार्क बेन्चेस तिनीहरू एक अपरिहार्य तत्व हुन् सानो शहरी वास्तुकला। उपयोगिता कार्यहरूको दृष्टिकोणबाट, तिनीहरू बस्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर स्थानिक योजनालाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरू शहरी फर्नीचर हुन्। पार्क, वर्ग, बगैंचा, सडक र शहर स्टप बेन्च संग सुसज्जित छन्।
व्यापक अर्थमा, बेन्चहरू पार्क र बगैंचामा मात्र होइन साना वास्तुकलाको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तत्त्व हुन्। हामी स्टेडियमहरु, एम्फीथिएटर चरणको अगाडि, स्कूल मेलाहरुमा, चर्चहरुमा, कब्रिस्तानहरुमा र अन्य धेरै ठाउँमा बेंचहरू पनि पाउन सक्छौं।
शहर बेन्चेस लामो पैदल थकित खुट्टा लागि एक ओएसिस हो, साथ साथै एक क्षणको लागि रोक्नको लागि अवसर, जुन प्रेम कबुलीकरणको लागि एक अवसर हुन सक्छ। कम कवितापूर्वक भन्नुपर्दा, शहर बेन्चहरू केवल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बगैंचा र पार्क फर्नीचर हुन्, जस बिना यो खेल मैदानको वरिपरि, शहर बगैचाको भित्री भाग, पछाडिको पोखरीको क्षेत्र वा अन्य कुनै सार्वजनिक ठाउँको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ।
हामी फूल बगैंचामा सूर्यको किरणमा बसेर पार्कमा साथीसँग कुराकानी गरेर, पोखरीमा भएको किताब पढेर वा बच्चालाई खुशीको साथ खेल मैदानको आकर्षणको आनन्द उठाउँदै पार्क बेंचहरू प्रयोग गर्छौं। यदि यो पार्क बेंचहरु को लागी होईन, शहर को ठाउँ धेरै गरीब र धेरै कम कार्यात्मक हुनेछ।
शहर पार्क बेन्चेस
त्यहाँ धेरै प्रकारका शहर बेन्चहरू छन्। तिनीहरूको प्रकार तिनीहरूको गन्तव्य, निर्माण, तिनीहरूको निर्माणको लागि प्रयोग गरिएको सामग्री, साथै शैली र डिजाइनको कारणले भिन्न हुन सक्दछ।
व्यवस्था वा उद्देश्यका कारण हामी भिन्न हुन सक्छौं सडक बेन्चेस, प्राय जसो सहर बेंच भनिन्छ, पार्क बेन्चेस र बगैचा बेन्च.
निर्माणको कारणले, यो संरचना हो, यो बाहिर खडा छ बैकरेस्ट बिना बेन्चहरू वा बैकरेस्टको साथ बेन्चहरू। चार वा बढी खुट्टामा बेन्चहरू उभिएका छन् र स्थायी रूपमा तिनीहरूको सम्पूर्ण सतहको साथ भूमिमा जडित छ।
निर्माण र अन्तिम सामग्रीको प्रकारको कारण, पार्क बेंचहरू विभाजन गरिएको छ कास्ट फलामको बेंच, इस्पात बेंच - इस्पात पट्टिबाट बनेको बेन्च, ठोस बेंच, बेन्चेस प्रबलित कंक्रीट पूर्वनिर्मित तत्वबाट बनेको, ढु stone्गाको बेन्च वा प्लास्टिक बेंच.
शैली र डिजाइनका कारण हामी दर्जनौं विभिन्न प्रकारका पार्क बेन्चहरू छुट्याउन सक्छौं। सरल ब्रेकडाउन समावेश गर्दछ आधुनिक बेंच र परम्परागत बेंच, प्राय: दिइएको युगको शैलीमा मोडेल गरिन्छ वा वरपरका भवनहरू र अन्य तत्वहरूमा अनुकूलित हुन्छ सानो शहरी वास्तुकला.
सर्वश्रेष्ठ पार्क बेन्चेस
पार्क बेन्च छनौट गर्दा के विचार गर्ने? त्यहाँ धेरै मापदण्ड छन्। तल हामी तिनीहरू मध्ये सब भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुत गर्दछौं।
सस्तो पार्क बेंचहरू? मूल्य
कुनै पनि प्रकारको खरीद वा लगानीसँगै, उत्पादनको मूल्य सधैं चयन मापदण्ड मध्ये एक हो। यस अवस्थामा, पार्क बेंचको मूल्य ज्यादातर बेन्चको सामग्री र यसको आयामहरूमा निर्भर गर्दछ। सस्तो पार्क बेंच अक्सर स्टील बेंच संरचना हो। सबैभन्दा सानो सस्तो हुनेछ। ठूलो बेंच, अधिक सामग्रीहरू यसलाई उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले मूल्य पनि बढ्छ।
सुरक्षित शहर बेन्चहरू
सबै भन्दा माथि, बेन्च वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। यसको संरचना भरपर्दो र टिकाऊ हुनै पर्छ ताकि यस सडक फर्नीचरको प्रयोगको सुरक्षा यसको प्रयोगबाट नहोस्।
यद्यपि त्यहाँ कुनै आधिकारिक पोलिस मानक छैन जुन पार्क बेंचहरूमा सीधा लागू हुनेछ, त्यहाँ समान आवश्यकताहरू छन् जुन पार्क बेन्चहरू डिजाईन गर्दा र निर्माण गर्दा लागू गरिनु पर्दछ। खेल मैदान मैदानका लागि PN-EN ११1176 standard मानक प्राय जसो प्रयोग गरिन्छ।
पार्क बेंचको स्थायित्व
सार्वजनिक स्थानमा छोडियो फर्निचर तोडफोडको पर्दाफास भयो। त्यसकारण, पार्क बेंचहरूमा अक्सर एन्टी-भ्यान्डल प्रणाली हुन्छ। यो बेन्चको एक्स्टेन्सन हो जुन जमिनमा खनेको छ, जसले बेन्चलाई सार्न, चोरी वा विस्थापन विनाशको कुनै पनि अन्य प्रकारबाट रोक्दछ।
एउटा फोहोर क्यानको साथ बेंच
अक्सर पार्क बेंचको एक अविभाज्य तत्व एउटा कचौरा बिन हुन्छ। यो यसको तत्वको रूपमा बेन्चसँग एकीकृत गर्न सकिन्छ। यो सानो वास्तुकलाको एक अलग तत्व हुन सक्छ, तर त्यसपछि यो सावधानीपूर्वक चयन र बेन्च डिजाइनको साथ दृश्यमान अनुकूल हुनुपर्छ।
पार्क बेंचहरू टेबल, रेजिन्टहरू र अन्य धेरै तत्वहरू सहित सुसज्जित पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूले सामान, पर्स वा ब्याकप्याकको लागि ठाउँ प्रदान गर्छन्। उनीहरूले तपाईंलाई आरामसँग पुस्तक आराम गर्न, वस्तुहरू राख्न वा खाना खान रेस्टुराँमा जस्तो अवस्थामा अनुमति दिन्छ। पार्कहरूमा बेंचहरू कहिलेकाँही टेबलहरू सँगै हुन्छन् जुन चेस, चेकर्स वा अन्य खेलहरू खेल्ने ठाउँ हुन्। बेंचहरू बत्तीको रूपमा एकीकृत प्रकाश हुन सक्छ। तिनीहरू आर्बर, झरना, मूर्तिकला वा फूलको बेडको अंश हुन सक्छन्। आज केवल कल्पनाले डिजाइनरलाई सीमित गर्दछ!
कास्ट फलाम पार्क बेंचहरू
कार्बन र फलामको मिश्रित फलामलाई कास्ट गरिन्छ। यो सब भन्दा टिकाऊ निर्माण सामग्री मानिन्छ कि शहर बेंचको उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। कास्ट फलामको रैकले धेरै प्रकार र आकारहरू लिन सक्दछ। तिनीहरूसँग फेन्सी सजावट र असामान्य खुट्टा फिटिंगहरू छन्। त्यस्ता डिजाइन गरिएका बेन्चहरू प्रायः कहिँ पनि काम गर्ने छन्, किनकि तपाईं स्वतन्त्र रूपमा तिनीहरूको उपस्थितिलाई आकार दिन सक्नुहुन्छ। कास्ट फलामको बेन्च फर्नीचरको सहरी टुक्रा हो जुन पार्क, बगैंचा र वर्गमा राम्रोसँग काम गर्दछ।
कास्ट फलाम पार्क बेंचहरू, संरचना बनाए पछि, पाउडर लेप गरिएको छ, धन्यवाद जुन फ्रेम स्पर्शको लागि रमाइलो छ र यसको सतह चिकना र क्षरण प्रतिरोधी छ।
कास्ट आयरन पार्क बेंचको अर्को फाइदा तिनीहरूको वजन हो। त्यस्ता पार्क बेन्चहरू यति भारी हुन्छन् कि ती जमीनमा लंगर नबनाई तिनीहरू अत्यन्तै स्थिर रहन्छन्। ब्याकरेस्टमा उफ्रने बच्चाहरू सजिलैसँग यस्तै भारी संरचनालाई उल्टाउन सक्दैन, र वान्डलहरूले पनि खराब कामहरू गर्न इन्कार गर्न सक्दछन्।
काठ पार्क बेंचहरू
सम्पूर्ण काठको बनेका बेंचहरू धेरै प्रभावशाली देखिन्छन्। यो प्राकृतिक भवन ब्लकले तिनीहरूलाई चरित्र र बडप्पन दिन्छ। दुर्भाग्यवश, जसरी काठको मामला छ, यसलाई आवधिक मर्मत आवश्यक छ। तिनीहरूलाई नियमित रूपमा चित्रित र नवीकरण गर्न आवश्यक छ। प्रतिकूल मौसम अवस्थाहरू विरूद्ध संरक्षणको ख्याल राख्नुहोस्।
काठ पार्क बेन्चहरू सिधा जमिन, बालुवा वा घाँसमा राख्नु हुँदैन। तिनीहरू स्थायी वा नियमित रूपमा भिजेको जमिनको सम्पर्कमा आउनुहुन्न। तिनीहरू छत भएका ठाउँहरू र तीनिहरू कठोर र सुक्खा सतहको लागि उपयुक्त छन्।
धातु पार्क बेंचहरु
विश्वव्यापी, आधुनिक शहर बेन्चहरू? वा शायद निजी बगैचाको लागि बेंच? छतमा? धातु बेन्चहरू उद्धारको लागि आउँदछन्। विभिन्न धातु मिश्रहरू तिनीहरूका फ्रेमहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ, प्राय: टिकाऊ, टिकाऊ र प्रकाश। निर्माण सामग्रीको यस प्रकारको एक उदाहरण एल्युमिनियम हो।
धातु बेंचको आधुनिक डिजाइन छ। तिनीहरूको एक लाभ भनेको कम तौल हो। त्यस्ता बेन्चहरू ठाउँ-ठाउँमा सर्नको लागि धेरै सुविधाजनक हुन्छन्। तिनीहरू बाहिरी प्रदर्शन वा फर्निचरको बगैंचाको टुक्राहरूको लागि दर्शकहरूको लागि सिटको रूपमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दछन् जुन यसको स्थिति अधिक पटक परिवर्तन गर्दछ, उदाहरणका लागि। मौसममा निर्भर गर्दै।
कंक्रीट र ढु stone्गा पार्क बेंचहरू
पार्क वा शहर बेन्चमा बोर्डहरू, परम्परागत ब्याकरेस्ट र खुट्टाहरू हुनु हुँदैन। यो एक ठोस कास्ट हुन सक्छ, स्वतन्त्र रूप मा गठन वा ढु stone्गा मा नक्काशी। यी प्रकारका बेन्चहरू भारी छन्, मर्मतको आवश्यक पर्दैन र वस्तुतः अविनाशी हुन्छन्। तिनीहरू सिढी, झरना वा फूलको ओछ्यानको एक अंश हुन सक्छन्। तिनीहरू साना वास्तुकलाको अन्य तत्त्वहरूको साथ पूर्ण रूपमा मिसिन्छन्।
लोकप्रिय समाधानहरूमा बहु तत्वहरू संयोजन पनि समावेश गर्दछ। काठको ब्याकरेस्ट र सीट भएको बेंचमा ठोस खुट्टा हुन सक्छ। यो सबै लगानीकर्ताको अपेक्षा र डिजाइनरको कल्पनामा निर्भर गर्दछ।
बगैचा बेंचठोस बेंचकाठको बेन्चशहर बेन्चेसगार्डन बेंचपार्क बेन्चेसकंक्रीट पार्क बेन्चेसबैकरेस्ट बिना पार्क बेन्चमूल्य पार्क बेन्चेसपार्क बेन्चेस मूल्य सूचीकाठ पार्क बेंचहरुधातु पार्क बेन्चेसशहर पार्क बेन्चेसआधुनिक पार्क बेन्चेसनिर्माता पार्क बेन्चेसकास्ट फलाम पार्क बेंचहरुइस्पात बेंचकास्ट फलामको बेंचशहर पार्क बेन्चेसआधुनिक पार्क बेन्चेससस्तो बेन्चहरूसस्तो पार्क बेन्चेस